Niteraka tsikera an-tserasera ny fikasan’ny tanàndehibe Shinoa handrara ireo olona tsy vita vaksiny hiditra ny toerana ho an’ny daholobe · Global Voices teny Malagasy
Mihevitra ny olom-pirenena Shinoa fa voafehin'i Shina ny COVID-19.
Voadika ny 22 Jolay 2021 4:30 GMT
Fanambarana avy any amin'ny distrikan'i Beiliu, Shina, mitaky ny fianakavian'ny ankizy rehetra any an-tsekoly mba atao vaksiny mba ahafahan'izy ireo misoratra anarana. Sary avy amin'ny CitizenNews any Hong Kong.
Tanàndehibe Shinoa am-polony vitsivitsy no nametraka politika famerana mandrara ny olona tsy vita vaksiny hitsidika ny toerana ho an'ny daholobe, anisan'izany ny sekoly, ny hopitaly, ny fitateram-bahoaka ary tsenam-barotra lehibe. Tanàndehibe maro no inoana fa mety hametraka politika mitovy amin'izany.
Ilay politika, izay nambara tsy nisy fanazavana firy, dia nanaitra ny olom-pirenena maro izay nahazo toky matetika fa voafehin'i Shina ny COVID-19, noho ny habetsahan'ny vaovao miabo nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy nandritra ny faha-100 taonan'ny Antoko Kaomonista Shinoa tamin'ny voalohan'ny volana Jolay.
Ity ambany ity misy hafatra fankalazana niparitaka tao amin'ny tambajotra sosialy Shinoa tamin'ny 2 Jolay:
#Miaiky volana tamin'ny lanonan'ny faha-100 taonan'ny Antoko Kaomonista Shinoa#
Tsy misy manao arovavaorona intsony!
Tamin'ny 1 Jolay, tao amin'ny Kianja Tiananmen, hetsika iray nahitana olona an'hetsiny maro, tsy nisy nanao arovavaorona.
Nitondra arovavaorona avokoa ny olona rehetra tao Shina rehefa nino izao tontolo izao fa fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny fanaovana arovavaorona. Shina no firenena voalohany nanala arovavaorona rehefa noterena hanao arovavaorona izao tontolo izao noho ny COVID-19.
Maneho ny tena dikan'ny atao hoe zon'olombelona ny tantaran'ilay arovavaorona. Firenena lehibe sy matanjaka manana sivilizasiona 5 000 taona, voafehintsika amin'ny fomba milamina ny zava-drehetra. Nilaza ny fikambanan'ny Firenena mikambana fa ‘Shina izao no firenena tony indrindra’, avy amin'ny fahatokisantsika tena ny fahatoniana toy izany, Avy amin'ny fifehezan-tena sy fahatsiarovan-tena ny fahatokisantena toy izany. Ireo rehetra ireo no avy amin'ny fototarazo mampiavaka ny kolontsaina Shinoa. #Sambatra tokoa isika fa nijoro ho vavolombelona androany #
Manantena i Shina fa hahatratra 70 isan-jato ny tahan'ny fanaovana vaksiny amin'ny faran'ny 2021. Hatreto, fatrana vaksiny miisa 1,38 miliara no nomen'ny firenena, manodidina ny 48 isanjato amin'ny isan'ny mponina ao aminy. Saingy, tsy nifandanja firy ny fizarana. Any amin'ny tanàndehibe toa an'i Beijing, Shanghai ary Guangzhou ny tahan'ny vaksiny dia mihoatra ny 80 isan-jato. Ambany lavitra ny taha raha ho an'ny tanàndehibe ambaratonga faharoa sy fahatelo ary ireo Kaomina ambanivohitra.
Rehefa miparitaka manerana an'i Azia ny kinova Delta, dia mihevitra ny manampahaizana mpandinika ny virosy fa mety hidina hatrany amin'ny 20 isanjato ny fandairan'ny vaksiny Shinoa. Na izany aza, nitatitra ny fampahalalam-baovao avy any an-toerana fa nilaza ny mpandinika valan'aretina malaza any Shina Zhong Nanshan fa voaporofo ho mandaitra amin'ny karazana kinova ny vaksiny Shinoa. Misy ny mpitsikera milaza fa mbola tsy namoaka lahatahiry klinika amin'ny dingana fahatelo momba ny vaksiny i Shina , izay lazain'i Zhong fa noho tsy fisian'ny marary COVID-19 hanaovana fitiliana any Shina no mahatonga izany.
Napaingotra tamin'ny kabarin'i Zhong mba hanasongadinana ny fahatokisantenan'i Shina amin'ny ady amin'ny valan'aretina ny tenirohy #凡尔赛 發言, midika hoe ‘kabary reharehan'andriana’.
Mifanohitra tanteraka tamin'ny hafatra miabo rehetra niparitaka tamin'ny aterineto tao anatin'ny roa herinandro lasa ny politika famerana vaovao. Ankoatra izay, nahatonga fanakianana betsaka ny tsy fahampian'ny fanazavana tamin'ny fanambarana nataon'ny governemanta. Ity ambany ity ny fanambarana navoakan'ny tanàndehiben'i Jinjiang ao amin'ny faritanin'i Fujian tamin'ny alàlan'ny fandefasan-kafatra am-pinday:
Tokony hatao vaksiny avokoa ny mponina rehetra mihoatra ny 18 taona (na aiza na aiza no monina) izay tsy manana antony ara-pahasalamana tsy hanaovana ny vaksinin'ny COVID-19.
Manomboka amin'ny 22 Jolay, ny olona rehetra mihoatra ny 18 taona dia tsy maintsy mampiseho ny fandraketana vaksininy (marika fanaovana vaksiny amin'ny kaody ara-pahasalamana amin'ny finday ao an-tanàndehibe) alohan'ny hidirany amin'ireo tranom-panjakana lehibe eto an-tanàndehibe.
Amin'ny 22 Jolay, ny mpikambana ao amin'ny antoko sy ny mpiasan'ny governemanta ary ny andrim-panjakana rehetra ary ireo ao amin'ny orinasan'izy ireo dia tsy maintsy atao vaksiny (raha tsy hoe misy antony ara-pahasalamana manokana). Tsy mahazo mandeha miasa ireo izay mbola tsy vita vaksiny.
Manomboka amin'ny 1 Aogositra, ny olona tsy vita vaksiny ka tsy misy antony ara-pahasalamana (raha tsy hoe marary angaha izy ireo) dia tsy avela hiditra ny tobim-pitsaboana, toeram-pizahan-tany, trano fitaizana beantitra, akaninjaza, sekoly (ao anatin'izany ireo toeram-piofanana) sy ny toerana ara-kolontsaina sy fialamboly.
Nametraka fanontaniana maro toy ny nolazain'i @xie-nm-ni-cheng tao amin'ny Weibo ny tsy fitovian'ny politika:
Tamin'ny voalohany, [nilaza ny manam-pahefana] fa “an-tsitrapo” ny fanaovana vaksiny. Taty aoriana, “tsy terena” izany ary farany lasa “mametra ny fivezivezena”. Fahatokisana ny governemanta ve izany? Izany ve no sosialisma?
Na dia afaka miala amin'ny fameperana aza ny olona manana antony ara-pahasalamana dia tsy mora ny mahazo porofo ara-pitsaboana. Ity ambany ity ny zava-niseho iray nozaraina tao amin'ny Weibo avy amin'i @ yi-zhang-jing-zi:
Noho ny fahasalamako dia tsy nahazo vaksiny aho, saingy nitaky porofo ara-pitsaboana ny fikambanana misy ahy. Nankany amin'ny tobim-pahasalamana fanaovam-baksiny roa aho ary nasain'izy ireo nankany amin'ny hopitaly. Saingy nilaza ny dokotera tany amin'ny hopitaly fa nolazaina izy ireo tsy hamoaka porofo ara-pitsaboana ho an'ireo marary. Niantso ireo laharam-pifandraisana aho, saingy tsy nanome vahaolana izy ireo. Inona no tokony ataoko? Tsy ny olona rehetra no afaka manao vaksiny!
Nanamarika ny mpisera Weibo hafa users@sheng-bu-hui-chuan fa mety hanimba ny fiainan'ny olom-pirenena manokana izany politika izany:
Tsy manana hasim-piainana ireo izay tsy mahazo atao vaksiny. Isaky ny miditra amin'ny toerana natokana ho an'ny vahoaka izy ireo dia tsy maintsy manazava hoe “mihoatra ny 80 taona aho”, “Vao avy nahazo vaksinin'ny HPV aho”, “Bevohoka aho”, “manana aretina manokana aho”. Iza no nahita hevitra ratsy toa izany? Misy tsy salama ny sainy?
Manahy ihany koa ny olona sasany fa ampiharina amin'ny sehatry ny politika hafa amin'ny hoavy ny paikady mitovy amin'izany, toy ny nolazain'ny zhi-tien-shou-wan-zhe hoe:
Raha vantany vao mahavita manatratra tanjona politika kendrena izy ireo amin'ny alàlan'ny famerana ny fivezivezena, ny fanesorana ny zo hianatra, ny fampiatoana ny karama sy ny asa, amin'ny hoavy dia hiverimberina imbetsaka ny paikady mitovy amin'izany. Raha mampihatra fomba mitovy amin'izany ry zareo amin'ny sehatra politika hafa hanerena antsika hanaraka izany, inona no hiafaran'ny fiainantsika? Tokony hanohitra izany politika misetrasetra aotra izany isika na vita vaksiny na tsia.